ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကြောင့် ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ကိစ္စကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဂျူတီခွဲထားတယ်လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောလာတဲ့ ခင်လွှမ်း – Askstyle
ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကြောင့် ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ကိစ္စကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဂျူတီခွဲထားတယ်လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
သရုပ္ေဆာင္ စည္ျဖိဳးနဲ့ ခင္လႊမ္းတို့ကေတာ့ နွစ္ဖက္မိဘ သေဘာတူၾကည္ျဖဴစြာနဲ့ ခ်စ္သူေတြအျဖစ္ ေရႊလက္တြဲခဲ့ၾကျပီး မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ကိုယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္မွာေတာ့ အစီအစဥ္မရိွပဲ လက္ထပ္ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ျဖိဳးနဲ့ ခင္လႊမ္းတို့ကေတာ့ ရုတ္တရက္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတို့နွစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကင္စဦးအိမ္ေထာင္သည္ဘဝေလးကို ေအးခ်မ္းစြာနဲ့ပဲ ျဖတ္သန္းေနျပီး ရင္ေသြးေလးအတြက္ ဂရုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုး ရင္ေသြးေလးအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ေနၾကတဲ့ စည္ျဖိဳးနဲ့ ခင္လႊမ္းတို့ကေတာ့ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားေလးေၾကာင့္ ခ်ဥ္ျခင္းတက္တဲ့ကိစၥကို ဇနီးေမာင္နွံနွစ္ေယာက္ ဂ်ဴတီခြဲထားတဲ့အေၾကာင္းကို “ကိုယ္က ခုဆို မနက္၃နာရီခြဲ တစ္ခါ မနက္ ၇နာရီတစ္ခါ အစာ ထထ စားေနရတယ္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့လူေတေျပာတာေတာ့ အဲတာ ကေလးအက်င့္တဲ့။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား ခုထဲက Duty ခြဲၾကတယ္။ သူက မနက္ ၇နာရီတာဝန္ယူမယ္တဲ့။ ဂ်ဴးက မနက္၃ခြဲ တာဝန္ယူတဲ့ . ဟုတ္ပါၿပီ ေဖေဖစည္ရယ္ ရစ္ေမြခံသားႀကီးရဲ႕အခ်စ္ခံခ်စ္ဇနီး ” ဆိုျပီး ခင္လႊမ္းက သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာမွာ ေျပာလာပါတယ္။
စည္ျဖိဳးကေတာ့ ရင္ေသြးေလးကို အမွန္တကယ္ လြယ္ေဆာင္ထားရတဲ့ ခင္လႊမ္းထက္ ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ သည္းသည္းလႈပ္သူျဖစ္ျပီး သားဦးေလးအတြက္လည္း သူ့ကိုယ္သူ ဂရုစိုက္လြန္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း ခင္လႊမ္းနဲ့ စည္ျဖိဳးတို့အျဖစ္ကိုၾကည့္ျပီး သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူကြည်ဖြူစွာနဲ့ ချစ်သူတွေအဖြစ် ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြပြီး မမျှော်လင့်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားချိန်မှာတော့ အစီအစဉ်မရှိပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ရုတ်တရက် လက်ထပ်ခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြင်စဦးအိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကို အေးချမ်းစွာနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းနေပြီး ရင်သွေးလေးအတွက် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေကြတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားလေးကြောင့် ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ကိစ္စကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဂျူတီခွဲထားတဲ့အကြောင်းကို “ကိုယ်က ခုဆို မနက်၃နာရီခွဲ တစ်ခါ မနက် ၇နာရီတစ်ခါ အစာ ထထ စားနေရတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတေပြောတာတော့ အဲတာ ကလေးအကျင့်တဲ့။ ဆိုတော့ နှစ်ယောက်သား ခုထဲက Duty ခွဲကြတယ်။ သူက မနက် ၇နာရီတာဝန်ယူမယ်တဲ့။ ဂျူးက မနက်၃ခွဲ တာဝန်ယူတဲ့ . ဟုတ်ပါပြီ ဖေဖေစည်ရယ် ရစ်မွေခံသားကြီးရဲ့အချစ်ခံချစ်ဇနီး ” ဆိုပြီး ခင်လွှမ်းက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ ရင်သွေးလေးကို အမှန်တကယ် လွယ်ဆောင်ထားရတဲ့ ခင်လွှမ်းထက် ပိုပြီးတော့တောင် သည်းသည်းလှုပ်သူဖြစ်ပြီး သားဦးလေးအတွက်လည်း သူ့ကိုယ်သူ ဂရုစိုက်လွန်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခင်လွှမ်းနဲ့ စည်ဖြိုးတို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။